Edere site Tranquillus | August 25, 2021 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Usoro nkwado site na ngwụcha email: Ọdịnaya ojiji
Ị naghị ezigara onye ọrụ ibe gị ozi email ọkachamara dịka ị ga -ezigara onye nlekọta gị ma ọ bụ onye ahịa. Enwere koodu asụsụ ịmara mgbe ịnọ na gburugburu ọkachamara. Mgbe ụfọdụ anyị na -eche na anyị ma ha, ruo mgbe anyị matara na anyị na -emehie ụfọdụ omenala. N'isiokwu a, anyị na -akọwa ọnọdụ ebe ụfọdụ usoro nkwanye ugwu dabara adaba.
Nkebi ahịrịokwu ọma "Nwee ọmarịcha ụbọchị"
N'echiche nke ọkachamaraemail, Sylvie Azoulay-Bismuth, onye edemede nke akwụkwọ "Ịbụ email pro", okwu nkwanye ùgwù "Nwee ọmarịcha ụbọchị" bu n'obi maka ndị anyị na ha nwere ezigbo mmekọrịta ọkachamara. Enwere ike iji ya mgbe ị na-ezigara onye ọrụ ibe ozi email.
Nkebi ahịrịokwu dị mma "Ekele kacha mma"
Ị nwekwara ike mara ya ka ị ghara ịkwụ ụgwọ maka nkwukọrịta dara ada! A na -eji ahịrịokwu dị mma "Ekele kacha mma" mgbe ịchọrọ igosipụta enweghị afọ ojuju gị. A na -echekwa nke a na ọdịnaya nke email nke na -ajụkarị oyi.
Nke a bụ ihe na -eme ụfọdụ ndị ikwu ikwubiga okwu ókè na a na -eji usoro a mgbe a na -agwa "ndị iro" mmadụ okwu.
Nkebi ahịrịokwu dị nsọ "Ekele dịrị gị"
Ọ bụ usoro ziri ezi na usoro enyi. Ọ naghị ekpe ikpe. Mgbe ị hụtụbeghị mmadụ, enwere ike iji usoro a zitere ha ozi email ọkachamara.
Dịka ị pụrụ ịhụ, na nkebi ahịrịokwu "Ezi obi," ekele adịghị iche ma ọ bụ ka mma. N'echiche ọtụtụ ndị ọkachamara email, usoro a bụ ụdị "ezigbo igodo isi".
GỤỌ Ihe nzuzo nke email mkpesa edere nke ọma
N'ime akwụkwọ ozi mkpuchi, ọ nwere uru ya niile ma akwadoro ya nke ukwuu. Anyị nwere ike ịsị dịka ọmụmaatụ: "Nara, Madam, Sir, ekele m nke ọma".
Nkebi ahịrịokwu dị nsọ "Ezi obi ụtọ"
Ọ dị n'agbata "Ezi obi nke gị" na "Ezi obi". Nkebi ahịrịokwu ọma "Ezi obi" pụtara "jiri obi m niile". O sitere na Latin "Cor" nke pụtara "Obi". Mana ka oge na -aga, ọdịnaya mmetụta uche ya belatara. Ọ ghọọla usoro nkwanye ugwu a na -ejikarị na -anọpụ iche.
Ụkpụrụ nkwanye ugwu: "Site na ncheta kacha mma m nwere" ma ọ bụ "Enyi"
A na -eji usoro nkwanye ugwu a mgbe ị na -ezipụ ndị ọrụ ibe anyị na ndị ọrụ mmekọrịta anyị na ha ketara ihe ncheta dị mma.
Anyị na -ejikwa usoro '' Enyi '' mgbe anyị na ndị nta akụkọ gị na -ekerịta ọbụbụenyi. Nke a na -eche na ị marala ya nwa oge.
Nke a bụ eziokwu maka ụmụ nwanyị ndị ọzọ. N'adịghị ka mmadụ nwere ike iche, ọ pụtaghị "Abụ m nke gị". Kama, nkọwa ziri ezi bụ "a ga m asị gị nke ọma". A na -ejikarị ya eme ihe mgbe ọ na -achọ ụmụ nwoke.
Usoro nkwanye ugwu na njedebe nke email n'otu ọnọdụ Ọnwa Iri 15, 2021Tranquillus
gara agaHọrọ njedebe ziri ezi nke ahịrịokwu email, mana kedu ka ị ga -esi mee ya?
-esonụKedu ka esi eji ihe onyonyo echiche ka iburu n'isi nke ọma? - VIDIO